कामना सेवा विकास बैंकले माग्यो १ सय ७ कर्मचारी ! - Everest Dainik - News from Nepal
कामना सेवा विकास बैंकले माग्यो १ सय ७ कर्मचारी !
काठमाडौं, भदौ २२ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले विभिन्न पदका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी खाजेको छ । उसले विजनेस, अपरेसन र कन्ट्रोल कार्यका लागि विभिन्न पदमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी खोजेको हो ।
यति मात्रै होइन बैंकले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिरका विभिन्न स्थानका लागि शाखा प्रबन्धक, रिलेसनसिप मेनेजर, अपरेसन इन्चार्ज र ट्रेनी एसिस्टन्टसहित १०७ जना कर्मचारीको माग गरेको छ । थप जानकारीका लागि तलको लिंक क्लिक गर्नुस्-
याे पनि पढ्नुस डिजाइएर नेपाल ट्रेक्स ट्राभल्स एण्ड टुर्स कम्पनीमा कर्मचारी माग्यो
आवेदन दिने अन्तिम मिति असोज ३ गतेसम्म छ । आवदेन अनलाइनबाट दिन सकिने छ । त्यसका लागि तल दिएको लिंक क्लिक गर्नुस्-
ट्याग्स: #Vacancy, banking vacancy, job, Kamana sewa bikas Bank